Maalinta: Oktoobar 5, 2017
Rugta rasmiga ah ee Turkiga ee Teleferik, 11 bishii Oktoobar
Duqa Alanya Adem Murat Yücel wuxuu ku casuumay dhamaan muwaadiniinta furitaanka rasmiga ah ee Alanya Teleferik, oo ah riyada sanadlaha ah ee Alanya 30, oo la qaban doono 11 October Arbacada. Duqa Alanya Adem Murat Yücel, [More ...]
Duqa Magaalada Kharmanmaraş Fatih Mehmet Erkoç, Yedikuyular Ski Center ayaa siisay war wanaagsan oo ah in xilli-dhow la qabandoono. Safarada iyo baaritaanada kadib ee degmada Çağlayancerit, Erkoç, oo aaday Yedikuyular Ski Center, ayaa indha indheyn iyo daraasad ku sameysay halkan. [More ...]
xulka qaranka Turkey ee kubada cagta ayaa la ciyaari doonta in 6 October Eskisehir Eskişehir degmada Metropolitan kulanka Iceland siin doonaa taageerayaasha basaska iyo baabuurta oo bilaash ah fursad ay ku arkaan ciyaarta ka. 6 garoonka New Eskisehir Ataturk [More ...]
Ka jawaab celinta Dhibaatada Dhibaatada ee Duqa Magaalada Kocaoğlu
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu oo ka hadlay shaqooyinka taraamyada ayaa dhaliilay sababa la xiriira kororka cufnaanta taraafikada ee Izmir, KarşıyakaWaxaa jiray caylo la mid ah intii lagu guda jiray dhismaha taraamka. Way dhammaatay haddana dadka walaalaheen ah ee waddanku ku sugan yihiin ayaa la qaboojiyay. [More ...]
Helitaanka sahlan ee Caasimadda Sakarya
Dawladda Hoose ee Magaalada, Sakaryaspor'un 8 ayaa ciyaari doonta Axadda Axada bisha Oktoobar ilaa Kahramanmaraşspor waxay abaabuli doontaa adeegyada basaska garoonka. Safarrada ayaa u adeegi doona fagaaraha Demoqraadiyadda illaa 15.00. Fatih Pistil, Madaxa Qeybta Gaadiidka ee Dowlada Hoose ee Magaalada Sakarya, [More ...]
Codsi ahaan sida Revolution in Nidaamka Gaadiidka Socda ee Izmir
nidaamka gaadiidka caqli dhamaystiran ugu Turkey si uu noloshiisa soo galay Izmir. 24 ayaa daawanaysa oo maamusha dhammaan xididdada waaweyn ee magaalada waxayna maamushaa taraafikada markii ugu horeysay. Izmir [More ...]
Gebze Metro waxaa la bilaabi doonaa maalgelin 2,5 Milyan TL
Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada İbrahim Karaosmano madelu wuxuu ka hadlay bayaan ku saabsan mashruuca metrooga ee Gebze. Isaga oo ka hadlaya inta lagu guda jiray sahaminta gudaha ee xarumaha metrooga ee Magaalada Gebze City Square, Duqa Magaalada Karaosmanoğlu wuxuu yidhi, Ase Magaalooyinka oo sii kordha, waxaan aragnaa in tirada dadku aad u kordhayso. [More ...]
Shaqooyinka khatarta ah iyo kuwa aadka u halista ah ee fasalka, 25 Sebtember 2018'den kuwa aan haysan Shahaadada Shahaadada Xirfadaha waxaa lagu dabaqi doonaa nidaamka dembiga. Hay'ada Shahaadada Xirfada Mihnadeed ee ku saabsan Xirfadaha looga Baahan Yahay Shahaadada Shahaadada Xirfadda [More ...]
Nidaamka Cusub ee Gaadiidka Wadada
Tallaabooyin argaggixiso ayaa imanaya gaadiidka waddooyinka. Tigidhada baska waxaa sidoo kale lagu iibsan doonaa lambar aqoonsi sida diyaaradaha. Aaladaha raajada ayaa lagu rakibi doonaa alaabada iyo wax soo saarka xarunta basaska. Tigidhada waxaa loo soo saari doonaa kuwa wadada mara. Ciqaabta culus ee saaran muwaadiniinta iyo shirkadaha aan u hoggaansamin qawaaniinta [More ...]
Karabük Iron iyo Iron Works (KARDEMİR) A.Ş. Bishii Janaayo-Sebtembar 2017, boqolkiiba 14,1 ee soosaarka birta jilicsan, boqolkiiba 12 ee soosaarka birta dareeraha ah, soosaarka wax soo saarka duuban marka la barbar dhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. [More ...]
Halic ayaa qarxay sicirka guryaha ee tareenka
Mashruuca taraamka ee u dhexeeya Eminönü iyo Alibeyköy, oo ka gudbi doona Xeebta Dahabiga ah ee Dahabiga ah, wuxuu ku dhuftay qiimaha guryaha ee degmada illaa 3. Qiimaha guryaha laga soo bilaabo 200 kun oo rodol ilaa 600 kun oo ginni Tramway oo ka socda Eminönü kuna taga Saldhigga Alibeyköy ee Istanbul [More ...]
Eskisehir ee Turkey "Duulista iyo Tareenka Systems" ayaa sidoo kale si degdeg ah noqoto ardayga la tai dalka Turkiga ... ALP Aviation Duulista iyo Hawada Supply iyo Dayactirka Xarunta goobaha ugu muhiimsan Turkiga ee ... "Rail" iyo sidoo kale [More ...]
Wasiirka Dhaqaalaha Nihat Zeybekci, sida qorshaha dowladda si soo dhiso goobaha lacag la'aan ah beeraha oo khaas ah oo kala duwan dalka Turkiga, ayaa sheegay in ay u dhisi kari waayay garoonka saddexaad ee Istanbul dhow ugu weyn oo ka mid ah ayaa sheegay in waxa uu noqon lahaa logistics e-commerce zone free. ee Izmir [More ...]